Mikarakara Andro Iraisampirenena Ho Firaisankina Amin’ireo Bilaogera Enjehina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2017 6:14 GMT
Inona: Nodimandry tamin'ny fomba mampahonena tao am-ponja i Omid Reza Mir Sayafi, bilaogera iraniana tamin'ny 18 marsa, ho fanehoana ny zavamisy fa mora very tahaka ny fahamoran'ny fanivanana bilaogy ny ain'ny bilaogera iray.
Imbetsaka ny bilaogera no noderaina noho ny fandraisany anjara sy ny lanja azo amin'ny fampahalalana ny fiaraha-monina. Ankasitrahana amin'ny tranga maro ho feo tsy heno teo aloha ao amin'ny fiarahamonina izy ireo, saingy indrisy fa tsy re ny feon'izy ireo matetika rehefa miatrika fanenjehana ny bilaogera iray.
Mampalahelo moa fa tsy maningana ny mahazo an'i Omid Reza ary ampolony ireo mpisintaka an-tserasera no any am-ponja eto amin'ity tontolo manerantany ity ary mbola maro noho izany ireo miatrika fanenjehana ara-politika.
Rahoviana: Te-hanolotra ny 18 marsa isan-taona ho andro iraisampirenena ho firaisankina amin'ireo bilaogera nenjehina aho.
Nahoana: Afa-mahatsiaro, miresaka ary manaja amin'io andro io ireo bilaogera gadraina, ampijaliana, vonoina ho faty aryy rahonana ireo tsy ijerena ny hevitra politikany sy ny saranga na fiaviana misy azy isika. Afa-mifanakalo hevitra ihany koa isika amin'izay fepetra tokony horaisina ho fanohanana ireo bilaogera enjehina.
Ahoana: Vonona aho ny handray ny fanehoankevitrareo, ny hevitrareo, ny fisantarana ary teny momba ity lohahevitra ity. Hatramin'izao aho dia nahazo tamberina tsara avy amin'ny Komitim-Piarovana ny Bilaogera sy ny Digiactive ary bilaogera maro.
Iza: Miangavy mifandraisa amiko amin'ny helpforbloggers@gmail.com raha te-handray anjara ianao.